Canon CP-1300 Printer
Canon CP-1300 Printer သည် Color Printer အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး Print Resolution 300 x 300 dpi ပါဝင်၍ Printing Speed အနေဖြင့် Postcard Size - approx. 47 sec, Mini Stickers - approx. 27 sec ဖြင့်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ Canon KP- 108IN Color Ink Paper ကို အသုံးပြု၍4x6size များကို အရောင်အသွေးစုံလင်စွာ ထုတ်နိုင်ပါသည်။
Canon G-1010 Printer
Canon G-1010 Printer သည် Color Printer အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး Print Resolution 4800 x 1200 dpi ပါဝင်၍ Printing Speed အနေဖြင့် Approx 5.0 ipm ပါရှိပါသည်။ Original Ink Tank ပါဝင်၍ အရောင်အားဖြင့် (၄) ရောင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Print Only ကို A4, Legal အရွယ်အစားထိ အရည်အသွေးပြည့်ဝစွာဖြင့် ထုတ်နိုင်ပါသည်။
Canon L-170 FaxPhone
Canon L-170 FaxPhone တွင် Laser အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Fax Speed အနေနဲ့ 33.6 Kbps ပါရှိ၍ Print, Copy and Fax တို့ကို A4, Legal အရွယ်အစားထိ အရည်အသွေးပြည့်ဝစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
Canon EOS-M50 15-45 Camera
Canon EOS M50 သည်အီလက်ထရောနစ် viewfinder၊ အပြည့်အဝထိတွေ့နိုင်သောမျက်နှာပြင်၊ တစ်ခုတည်းသောထိန်းချုပ်ခလုတ်နှင့် 24MP APS-C အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည့် Entry-level mirrorless ကင်မရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် Canon ၏နောက်ဆုံးပေါ် DIGIC 8 processor နှင့် Dual Pixel AF လွှမ်းခြုံမှု၊ ၁.၇x ကောက်ပဲသီးနှံနှင့်အတူ 4K / 24p ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုအပြင် Wi-Fi, Bluetooth နှင့် NFC များလည်းပါရှိသည်။
Canon G-2010 Printer
Canon G-2010 Printer သည် Color Printer အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး Print Resolution4800 x 1 200 dpi ပါဝင်၍ Printing Speed အနေဖြင့် 5.0ipm ပါရှိပါသည်။ Original Ink Tank ပါဝင်၍ အရောင်အားဖြင့် (၄) ရောင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Print, Scan, Copy တို့ကို A4, Legel အရွယ်အစားထိ အရည်အသွေးပြည့်ဝစွာဖြင့် ထုတ်နိုင်ပါသည်။
Canon G-3010 Printer
Canon G-3010 Printer သည် ဖုန်းဖြင့် Wifi ချိတ်ဆက်၍ ရသည့် Color Printer အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး Print Resolution 4800 x 1200 dpi ပါဝင်၍ Printing Speed အနေဖြင့် Approx 5.0 ipm ပါရှိပါသည်။ Original Ink Tank ပါဝင်၍ အရောင်အားဖြင့် (၄) ရောင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Print, Scan, Copy တို့ကို A4, Legal အရွယ်အစား ထိ အရည်အသွေးပြည့်ဝစွာဖြင့် ထုတ်နိုင်ပါသည်။
Canon MF-3010 Laser Printer
Canon Lide 300 Scanner ၏ Resolutionအပိုင်းကတော့ 2400 x 2400dpi ဖြစ်ပြီး Scanner Type က Flatbed Scaner ဖြစ်ပါသည်၊၊ Paper Format အပိုင်းကတော့ A4 , Letter (216 x 297mm) အရွယ်အစားထိ Scanner ဖတ်နိုင်ပါသည်၊၊Light Source အနေနဲ့3 Color (RGB) LED ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်၊၊
Canon G-4010 Printer (4 in 1)
Canon G-4010 Printer (4 in 1) သည် Color Printer အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး Print Resolution 4800 x 1200dpi ပါဝင်၍ Printing Speed အနေဖြင့် 5.0/8.8 ipm (Colour, Black) ပါရှိပါသည်။ Original Ink Tank ပါဝင်၍ အရောင်အားဖြင့် (၄) ရောင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Print, Scan, Copy and Fax တို့ကို A4, Legal အရွယ်အစားထိ အရည်အသွေးပြည့်ဝစွာဖြင့် ထုတ်နိုင် ပါသည်။Wifi နဲ့လည်းတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် ပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါသည်။
Canon IXUS-185 Camera
Canon IXUS 185 Camera သည် 8x optical zoom မှန်ဘီလူးပါ၀င်သော ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော Ultra-Slim IXUS ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော မည်သည့်ဓါတ်ပုံနှင့် ဗွီဒီယိုများကို မဆို အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ 20.0 Megapixels နှင့် Face Detection ရှိသောအထူးကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိသောကြောင့် သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်ဖြစ်စေ မိသားစုနှင့်ဖြစ်စေ ရိုက်ကူးရာတွင်အသေးစိတ်ပုံရိပ်များကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Easy Auto သုံးပြီးခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Canon EOS-1500D (18-55) Camera
Canon EOS-1500D သည် CMOS အာရုံခံကိရိယာနှင့်စစ်မှန်သော DSLR ရိုက်ကူးမှုအတွက် optical viewfinder တပ်ဆင်ထားသော DSLR ကင်မရာဖြစ်သောကြောင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ရုပ်ရှင်များ ကိုဖမ်းယူနိုင်လိမ့်မည်။ လျင်မြန် တိကျသော AF ပါထားခြင်းကြောင့်ကြည်လင်ပြတ်သားသောရုပ်ပုံများကိုဖမ်းယူ ရန်လွယ်ကူပါသည်။ ပါ၀င်သည့် Wi-Fi / NFC ဆက်သွယ်မှုသည်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဆိုရှယ်မီဒီယာသို့ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ တင်နိုင်ပါသည်။
Canon iX6770 Printer သည် Color Printer အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး Print Resolution 9600 x 2400 dpi ပါဝင်၍ Printing Speed အနေဖြင့် 10.4 ppm ပါရှိပါသည်။ အရောင်အားဖြင့် (၄) ရောင် ပါဝင်ပြီး Cartridge ဖြင့် အသုံးပြုရသော Printer အမျိုး အစားဖြစ်ပါသည်။ Print Only ကို A3, A4 အရွယ်အစားထိ အရည်အသွေးပြည့်ဝစွာဖြင့် ထုတ်နိုင်ပါသည်။
CanoScan LiDE 400 သည်ထူးကဲသောအမြန်နှုန်း၊ အရည်အသွေးမြင့် ပုံစံဖြင့်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ Scan resolutions 4800 x 4800dpi ဖြစ်ပြီး ပါးလွှာပေါ့ပါးသော scanner တလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Canon IXUS-190 Camera
IXUS 190 သည်ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်သောပုံရိပ်များကိုဖန်တီးနိုင်သောကင်မရာတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။IXUS 190 cameraသည် 20-megapixel ၊ 10x Optical Zoom နှင့် Intelligent Image Stabilizer တို့သည်အသုံးပြု သူများအားတောက်ပသောရလဒ်များကိုကောင်းမွန်စွာထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
Canon GL790 Bottle
Canon GL790 Y Cartridge သည် original ဆေးဘူးဖြစ်သဖြင့် မိမိ printer အတွက် ထိခိုက်မူလျော့နည်းစေပါသည်။ စာရွက်ရေ 7000 ခန့်အသုံးပြုနိုင်သဖြင့် ကြာရှည်ခံသော ဆေးရည်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
Camera Bag DSLR (big)
Camera Bag DSLR (big) လေးကတော့ ရိုးရှင်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ချုပ်သားကို အသုံးပြုထားပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိတဲ့ ချုပ်ရိုးတွေကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အကြိုက်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Canon Hood EW-73B
Canon Hood EW-73B လေးကတော့ 17-85mm အရွယ်အစားရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Canon Speedlite 470EX-A1 လေးမှာတော့ အလွယ်တကူ ဖြုတ်နိုင်တက်နိုင်ခြင်း၊ ရှင်းလင်းပြီး အသေးစိတ်ကအစ ဖော်ပြနိုင်ခြင်း၊ အလင်း‌ရောင် ကောင်းကောင်းဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် အရည်သွေးကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Canon PowerShot ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာများတွင်တွေ့ရသည့် NB-11L lithium-ion ဘက်ထရီကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းထားပါသည်။ LED indicator များတပ်ဆင်ထားသောကြောင့် battery အားဘယ်လောက်ရှိသည်ကို အလွယ်တကူကြည့်နိုင်ပါသည်။ ELPH 115 IS, ELPH 130 IS, ELPH 135, ELPH 140 IS, ELPH 150 IS, ELPH 160,ELPH 170 IS, ELPH 180, ELPH 320 HS, ELPH 350 HS, A2300, A2400 IS, A2500, A2600, A3400 IS, A3500 IS, A4000 IS, SX 400 IS, SX410 IS စသော Canon PowerShot များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Canon NB 13L Battery
Canon NB 13L Battery ကိုသင်၏ PowerShot G7 X ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာထဲထည့်ပြီး စတင်ရိုက်လိုက်လို့ရပါတယ်။ ဘက်ထရီတွင် ၃.၆ ဗို့အားထုတ်လွှတ်မှု၊ ၁၂၅၀mAh စွမ်းရည်နှင့် 4.5Wh အဆင့်ရှိလို့ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အကြိုက်တွေ့စေမဲ့ Battery အမျိုးစားကောင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Canon NB-1LH Battery သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး စိတ်ချသော Battery အမျိုးအစားလေးဘဲဖြစ်ပါသည်။ Voltage အားဖြင့် 3.7v ဖြစ်၍ Capacity အနေဖြင့် 840 mAh စွမ်းရည်ရှိလို့ အသုံးပြုရာတွင် အကြိုက်တွေ့မည့် Battery လေးဘဲဖြစ်ပါသည်။
Canon 108 Paper
Canon 108 Paper တွင် ပို့စ်အရွယ်အစား4x6လက်မစာရွက် 108 ခုအပြင် ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် အရောင်မှင်ဖဲကြိုး2ခုပါရှိပါသည်။ ထို့ပြင် 108 Postcard အရွယ်အစားဓါတ်ပုံများကိုပုံနှိပ်ရန်မင်နှင့်စက္ကူအလုံအလောက်ပါရှိသည်။
Canon 35 Original Cartridge (Black)
Canon 35 Original Cartridge (Black) သည် Ink Volume 9.3ml ပါဝင်ပြီး ကြာရှည်ခံပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် အရည်အသွေးဖြင့် ရွက်ရေ Approx. 191 pages ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Canon 36 Original Cartridge (Colour)
Canon 36 Original Cartridge (Colour) သည် Ink Volume 12 ml ပါဝင်ပြီး ကြာရှည်ခံပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် အရည်အသွေးဖြင့် ရွက်ရေ Approx. 111 pages ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Canon 303 Original Cartridge
Canon 303 Laser Cartridgeလေးကတော့ Canon ကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။Laser Cartridge ဖြစ်တာကြောင့် ပုံနှိပ်ရာတွင် လွယ်ကူမြန်ဆန်နေမှာဖြစ်တာကြောင့် အချိန်ခဏအတွင်းမှာ လုပ်ငန်းများ ပြီးစီးနိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Canon 41 Original Cartridge (Colour)
Canon 41 Original Cartridge (Colour) သည် Ink Volume 12 ml ပါဝင်ပြီး ကြာရှည်ခံပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် အရည်အသွေးဖြင့် ရွက်ရေ Approx. 300 pages ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Canon 88 Original Cartridge (Black)
Canon 88 Original Cartridge (Black) သည် Ink Volume 21 ml ပါဝင်ပြီး ကြာရှည်ခံပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် အရည်အသွေးဖြင့် ရွက်ရေ 800 pages ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Canon 741 Original Cartridge (Colour)
Canon 741 Original Cartridge (Colour) သည် Ink Volume 8 ml ပါဝင်ပြီး ကြာရှည်ခံပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် အရည်အသွေးဖြင့် ရွက်ရေ 180 pages ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Canon 746 Original Cartridge (Colour)
Canon 746 Original Cartridge (Colour) သည် Ink Volume9ml ပါဝင်ပြီး ကြာရှည်ခံပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် အရည်အသွေးဖြင့် ရွက်ရေ 180 pages ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Canon 816 Original Cartridge (Colour)
Canon 816 Original Cartridge (Colour) သည် Ink Volume9ml ပါဝင်ပြီး ကြာရှည်ခံပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် အရည်အသွေးဖြင့် ရွက်ရေ 244 pages ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Canon 051 Cartridge (LBP-162)
Canon 051 Cartridge (LBP-162)ကတော့laser cartridge ဖြစ်တာကြောင့်ပုံနှိပ်ရာတွင် လျှင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပြီး ဆေးသားများလဲ အလွယ်တကူမပြယ်ဘဲ အသုံးပြုရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Canon 2700 Cartridge
Canon 2700 Original Cartridge (Black) သည် Ink Volume 29.1 ml ပါဝင်ပြီး ကြာရှည်ခံပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် အရည်အသွေးဖြင့် ရွက်ရေ 930 pages ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Canon 2700 Original Cartridge (Colour)
Canon 2700 Original Cartridge (Colour) သည် Ink Volume 9.6 ml ပါဝင်ပြီး ကြာရှည်ခံပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် အရည်အသွေးဖြင့် ရွက်ရေ 100-1000 pages ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Canon 2700XL Cartridge (Colour)
Canon 2700XL Cartridge (Colour) သည် Ink Volume 19.3 ml ပါဝင်ပြီး ကြာရှည်ခံပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် အရည်အသွေးဖြင့် ရွက်ရေ 1500 pages ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Canon 99 Original Cartridge (Colour)
Canon 99 Original Cartridge (Colour) သည် Ink Volume 12 ml ပါဝင်ပြီး ကြာရှည်ခံပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် အရည်အသွေးဖြင့် ရွက်ရေ 300 pages ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Canon 89 Original Cartridge (Black)
Canon 89 Original Cartridge (Black) သည် Ink Volume 21 ml ပါဝင်ပြီး ကြာရှည်ခံပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် အရည်အသွေးဖြင့် ရွက်ရေ 800 pages ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Canon NPG-67 Toner Yellow (IR3520.3320,3525)
Canon NPG-67 Toner Yellow (IR3520.3320,3525) သည် Laser Cartridge ဖြစ်တာကြောင့် ပုံနှိပ်စာအုပ်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းအသုံးပြုရာတွင် လွယ်ကူလျှင်မြန်ပြီး ဆေးသားကောင်းကိုရရှိမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Canon NPG-67 Toner Magenta (IR3520.3320,3525)
Canon NPG-67 Toner Magenta (IR3520.3320,3525) သည်ပုံနှိပ်များကို လွယ်ကူစွာ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်မှုနှင့် အထွက်နှုန်း မြင့်မားခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ထို့ပြင် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ရလဒ်များအထိထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။
FX-3 Cartridge သည် Canon Laser Printer များအတွက်ထုတ်လုပ်ထားသော Cartridge ဖြစ်ပြီတော့ Canon Laser Printer Model များဖြစ်ကြတဲ့ Canon CFX-L4000, Canon Fax L120, Canon Fax L220, Canon Fax L240, Canon Fax L260, Canon Fax L290, Canon Fax L295, Canon FaxPhone L75, Canon FaxPhone L80, Canon imageCLASS 1100, Canon LaserClass 1060P, Canon LaserClass 2050 စတဲ့ modleတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Canon GM 2070 Printer သည် စာရွက်များ၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုအလိုအလျောက်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုကိုခံစားစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။ Canon Print Inkjet / SELPHY Application ကိုအသုံးပြုပြီး စမတ်ဖုန်းများ၊ မိုဘိုင်းတက်ဘလက်များနှင့် လက်တော့ပ်များဖြင့်လည်း print ထုတ်နိုင်သောကြောင့် သုံးစွဲရ ပိုမိုအဆင်ပြေစေမည်ကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ Ink Bottle များသည် ယိုဖိတ်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် အချိန်ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။
Canon SX-620HS Camera
Canon SX-620HS Camera သည် 20.2 MP ရှိသော sensor ကိုအသုံးပြုထားပြီး CMOS ကိုအသုံးပြုပေးထားသည့်အတွက် ရုပ်ထွက်ကောင်းသောရုပ်ပုံများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။Lithium ion ကိုအသုံးပြုပေးထားသည့်အတွက် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ရုပ်ထွက်ကောင်းသော ရုပ်ပုံများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
Canon IXUS-285 Camera
ပါးလွှာပြီးစတိုင်ကျလှပသည့်သတ္တုကိုယ်ထည်ဖြစ်သော IXUS သည်သင်သွားလေရာနေရာတိုင်းတွင် သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူပြီး 12x Zoom Plus ဖြစ်သည့်အတွက် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဗီဒီယိုများ ကို အနီးအနားမှာ ဒါမှမဟုတ် ဝေးဝေးကို လွယ်လွယ်ကူကူရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ Wi-Fi ကို Dynamic NFC ဖြင့် အသုံးပြုပေးထားသည့်အတွက် အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Canon G-3000 Printer
Canon G-3000 Printer သည် Print, Copy, Scan သုံးမျိုးလုံးကို အသုံးပြုနိုင်သော Inkjet Printer အမျိုး အစားဖြစ်ပါသည်။ USB 2.0 ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ရုံမက Wireless, Direct Wireless တို့ဖြင့်လည်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ High volume printing စနစ်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးများကို ရရှိစေနိုင်သော Printer အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
Canon LBP610C/MF630C Cartridge (045)
Canon LBP610C/MF630C Cartridge (045) သည် Color Laser Cartridge အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Canon LBP610 and Color imageCLASS MF630C Printers စတဲ့ Printer များတွင်အသုံးပြုနိုင်သော Original Cartridge အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ High Quality (Black) ဖြင့်2800 pages အထိအသုံးပြုနိုင်ပြီး Color အနေဖြင့် 1300 pages အထိအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Canon 6560 Ori Cartridge 726( BK,M.C,Y)
Canon 6560 Ori Cartridge 726 သည်ပုံနှိပ်အရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေရန်အတွက် ထူးခြားသော ဂုဏ်သတ္တိများကို မှလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
Canon MF-269DW All In One Printer
Canon MF-269DW သည် Laser Printer အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Print Resolution 600 x 600 dpi နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Wireless Function ပါဝင်ပြီး A4, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal စတဲ့ စာရွက်အမျိုးအစားတွေနဲ့လဲ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
Canon DRC 240 Document Scanner
Canon DRC 240 မှာတော့ Double-sided scanning အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Optical resolution 600dpi ရှိပါတယ်။ Black and White 45ppm / 90ipm နဲ့ Colour 30ppm / 60ipm အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ High speed USB 2.0 အသုံးပြုနိုင်ပြီး CMOS CIS 1 Line Sensor နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Canon LP-E17 Battery မှာတော့ Capacity 1040mAh /Voltage 7.2 V နဲ့ အလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး EOS M3/EOS M5/EOS M6/EOS M100/EOS RP/EOS RP RF/EOS Rebel SL2/EOS Rebel SL3/EOS Rebel T6i/EOS Rebel T6s/EOS Rebel T7i/EOS Rebel T8i စတာတွေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Canon LP-E12 Battery (Ori)
Canon LP-E12 Battery မှာတော့ Capacity 875mAh ဖြစ်ပြီး Output Voltage 7.2 V နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Canon LBP 6030W (wifi)
ပြတ်သားသောစာလုံးများကို ထုတ်ဖော်ပေးနိုင်ပြီး laser printerဖြစ်သောကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆေးသားမပြယ်ဘဲအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ wifi ပါဝင်ထားသောကြောင့် ဖုန်း,PCအစရှိသည်တို့နှင့်လဲ လွယ်ကူစွာချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Canon 325 Cartridge (Original)
Canon monochrome လေဆာပရင်တာများ ဖြစ်သည့် MF3010၊ LBP6030 နှင့် LBP6030wနှင့်လဲတွဲဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ဆေးသားတွေ အလွယ်တကူမပြတ်နိုင်ဘဲ အချိန်ခဏအတွင်းမှာ လျှင်မြန်စွာ ပုံနှိပ်ထုတ်နိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Canon 331 Color Laser Ori Cartridge (BK)
Canon 331 Color Laser Ori Cartridge (BK) ကိုအသုံးပြု၍ မည်သည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်မဆို စာရွက်စာတမ်းနှင့် ရုံးသုံးပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြု၍ လေဆာစာရွက်အမျိုးမျိုးပေါ်တွင် ထူးခြားအရောင်စွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်လို့ လူကြီးမင်းရွေးချယ်သင့်သော Cartridge အမျိုးအစားလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Canon G2020 Printer
Canon G2020 Printer လေးသည် print ,copy ,scan အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကြည်လင်စိုပြေသော စာလုံးများကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။USB 2.0 နှင့်လွယ်ကူစွာချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး macbook နှင့်လည်းချိတ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Canon G3020 Printer (Print,Copy,Scan)
Canon G3020 Printer သည်ကာလာလေးရောင်ဖြင့် တိကျပြတ်သားသောစာလုံးများကိုပုံဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ Wireless ဖြစ်သောကြောင့် မိမိဖုန်းဖြင့်လဲလွယ်ကူစွာချိတ်ဆက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ Print ,copy ,scan ထုတ်ယူနိုင်ပြီးစွယ်စုံအသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါသည်။